CleanMyMac 3၊ သင်၏ Mac အတွက်မရှိမဖြစ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ် ငါက Mac ပါ
သင်၏ Mac အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် CleanMyMac 3
သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးပြီးနောက် မက်, သင်သည်၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွေ့အကြုံလက်၌မချန်မထားသင့်။ များစွာသောဖြစ်ရပ်များတွင်အမှိုက်သရိုက်များစုဆောင်းခြင်းသည်နေရာယူပြီးနှေးကွေးစေသည် မက်။ နှင့်3အဲဒီအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်စိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး။ ဒါ့အပြင်3၏ဗားရှင်းအဘို့အဆင်သင့်ပါပဲ OS X The ခေါင်းဆောင်.
1 CleanMyMac, အဆုံးစွန်လက်ထောက်
1.0.1 CleanMyMac3၏အားသာချက်မှာမလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းအခြားရွေးချယ်စရာများရှိသကဲ့သို့ကောင်းသောနည်းလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်ပြောရမည်။
တီထွင်ထားသောပရိုဂရမ်၏မူကွဲအသစ် MacPaw ဒါဟာအကြွင်းမဲ့အာဏာမွေ့လျော်သည်။ ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ထဲမှာ install လုပ် မက်၎င်းသည်၎င်း၏ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းနှင့်ထိရောက်သောအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ၏ interface3၎င်းသည်ရင်းမြစ်တစ်ခုချင်းစီ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောရှုထောင့်တစ်ခု၏ရှင်းလင်းချက်နှင့်အတူ၊
ပြီးတာနဲ့သင်ဘယ်ဘက်ရှိအသုံးအဆောင်တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုဖန်တီးထားသောအားကောင်းတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုရွေးချယ်ပြီးသင့်ရဲ့ဆန်းစစ်လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည် မက် ကွန်ပျူတာကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေစေမည့်အမှိုက်သရိုက်များကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ကိုရှာဖွေပါ "စမတ်သန့်ရှင်းရေး"။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၊3၎င်းသည်သင့်အားအန္တရာယ်ကင်းစွာဖျက်နိုင်သည့်ဖိုင်တွဲများကိုပြသပြီးဖျက်ပစ်ရန်တစ်ခုချင်းစီ၏တည်နေရာကိုပြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းရန်စိတ်ဝင်စားပါက၎င်းကိုပယ်ဖျက်ပါ။ ပရိုဂရမ်က၎င်းကိုမဖယ်ရှားပါ။
CleanMyMac3၏အားသာချက်မှာမလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းအခြားရွေးချယ်စရာများရှိသကဲ့သို့ကောင်းသောနည်းလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်ပြောရမည်။
ပရိုဂရမ် uninstaller သည်အလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုတော့သောထိုသဲလွန်စမရှိပဲဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ ယခုငါတို့လုပ်နိုင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Macs ပေါ်မှာအယ်လ် Capitan install လုပ်ပါ.
Maintenance: သင်၏လုပ်မည့်နေ့စဉ်အလုပ်များကိုစီစဉ်ရန် မက် မှော်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်
ရွေးချယ်မှု privacy ကို သင့်ရဲ့အရသာကိုဘယ်တော့မှမထားနိုင်ပါ။
လွယ်ကူစေမည့်အစားဘဝကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည့်ဝစ်ဂျက်များကိုဖယ်ရှားရန် Extensions များ
ကြိတ်ခွဲ။ တစ် ဦး ကအလွန်အသုံးဝင်သောနှင့်လိုအပ်သော option ကို။ ပြန်လည်စုစည်း။ မရနိုင်သောစုစုပေါင်းလုံခြုံရေးဖြင့်အချို့သောဒေတာများကိုဖျက်ပစ်ခြင်းသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။
ဒီအင်္ဂါရပ်တွေအားလုံးသင့်လက်ချောင်းထိပ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ပရိုဂရမ်ကုန်ကျစရိတ်ယူရို ၃၉.၉၅ ကအရမ်းဟန်ချက်ညီတဲ့စျေးဖြစ်ပုံရတယ်။ CleanyMac ၃ သင့်အားဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည် အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ ဒီတော့မင်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မြင်နိုင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော့်အမြင်မှာအဲဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ မက် သငျသညျရှိသင့်ပါတယ်။
စကားမစပ်ငါကြိုက်နှစ်သက်သောရွေးချယ်စရာများထဲကတစ်ခု 3, သင်သည်သင်၏လက်ရှိအခြေအနေကိုပြသသော "dashboard ကို" ဟုခေါ်သည် မက် ဒါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာ in situ ကိုမြင်နိုင်ပြီးတောင်မှတောင်ဖြစ်နိုင်တယ် မှတ်ဉာဏ်အခမဲ့သည်အထိ သင်၏စွမ်းရည်အပြည့်အဝရှိရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စများတွင် မက်။ ၎င်းသည်သင်၏အဖိုးတန်ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်းသင့်အားပုံမှန်ပြောသောစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်သတိပေးချက်များဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » သင်၏ Mac အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် CleanMyMac 3
အမေဇုံက Apple TV ကိုသူ့ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးမှာမရောင်းတော့ဘူး
အက်ပဲလ်သည် OS X El Capitan 10.11.1 ၏ဒုတိယမြောက်အများပြည်သူဆိုင်ရာ beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်